511 Apple Zvitoro Pasi Pose Vanozopedzisira Vanovhurwa Mushure memwedzi gumi nemitanhatu Yekuvhara Kwakadzika | Ndinobva mac
Pakupedzisira svondo rino Apple inogona kuzvirumbidza nekuve nezvayo zvese Zvitoro pasi rose zvakavhurwa. Iyo 511 Zvitoro zvekambani zviri pachena kune veruzhinji. Nekuda kwedenda rinofadza, izvi zvaive zvisina kuitika kwemwedzi gumi nemanomwe.
Nhau huru, pasina kupokana. Uye kwete nekuda kweApple, nekuti yakwanisa kuramba pasina matambudziko mazhinji nezvitoro zvakavharwa kwenguva yakareba, nekuda kwekutengesa pamhepo. Asi kwatiri tese, nekuti zvinoreva kuti zvishoma nezvishoma isu tiri kukunda hondo yekurwisa vakatukwa COVID-19. Bravo.
Pashure 17 mwedzi yekuvharwa kwepakati nepakati muzvitoro zvakasiyana zveApple zvakagoverwa pasi rese, Chikumi 15, 2021 yakaratidzirwa munhoroondo yekambani sezuva rekutanga kuti zvitoro zvese zve511 zveApple zvakavhurika kune veruzhinji panguva imwe chete.
Iyo 511 Apple Stores iri kune yakakura kana diki padanho kushingaira kutenderera pasirese. Zvichienderana nenyika, vazhinji vanopa zvakanangana-muchitoro kutenga pasina musangano uye vamwe vanovhura chete yekutora online online, zvichibva neChipiri mangwanani cheki yenzvimbo yega yega yechitoro pawebhusaiti yeApple.
Izvi zvaive zvisati zvaitika kubva ipapo Ndira 4, 2020. Zuva iri maApple Stores akatanga kuvhara mune dzimwe nzvimbo nekuda kwedenda. Uye sezvo hutachiona hwuchipararira kumativi akasiyana epasi, zvitoro zvaivhara.
Zvichienderana nekuti hutachiwana hwaitenderera sei munyika yega yega, zvitoro zvaizovhurwazve, kuti zvivharwe zvakare kana huwandu hwehutachiona hwawedzera. Paive nezvitoro zvakavharwa nekuvhurwa kusvika kana mumwedzi gumi nembiri yapfuura.
Chekupedzisira, Apple ikozvino inogona kusimbisa kuti ine ayo ese epanyama zvitoro zvinoshanda. Chimwezve chiratidzo chekuti zvishoma nezvishoma isu tiri kudzokera kune imwe tsika, zvirinani mune idzo nyika uko maitiro e kubaya yapfuura kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » 511 Apple Stores kutenderera pasirese anozopedzisira avhurwa mushure memwedzi gumi nemana yekuvharwa kwenguva